Ngaba umkhangeli weGPS unokunceda ukubamba iqabane elingathembekanga? | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Ngaba umkhangeli weGPS unokunceda ukubamba iqabane elingathembekanga?
Ungalifumana njani iqabane lakho lokukopela nge-GPS? Ungayibona ukuba yeyiphi na imoto okanye ibikuphi. Ayililo iqabane lakho apho babetshilo? Ngaba idilesi yemoto yakho ipakiwe kwihotele? Ngaba uhlala undwendwela indlu enye emva komsebenzi? Ukuba kunjalo, ngaba umyeni wakho okanye umfazi wakho angakopela. Ukusetyenziswa kweGPS yeyona ndlela ilula yokubamba abatyisi. Kukho umngcipheko omncinci kunye nomsebenzi. Akunyanzelekanga ukuba ubalandele. Uhlala phantsi kwikhompyuter yakho kwaye ubukele.
Kwilizwe elifanelekileyo, yonke into eyindoda kunye nabasetyhini iya kuphila ngokwezifungo zabo zomtshato. Okulusizi kukuba, oku akusoloko kunjalo kuba amaqabane engathembekanga. Abo bangathembekanga kunqabile ukuba bathembeke. Ungazi njani ukuba awuthembeki? Kuya kufuneka ujonge ifowuni yakho ukuze ufumane ubungqina. Izicelo zeTekhnoloji kunye ne-smartphone zenza ukuba kube lula ukulandelela umyeni ongathembekanga ngaphandle kolwazi. Siphanda ngeendlela ezininzi zokulandela umkhondo wakho, ngaphandle kokuchitha imali.
Ixesha labameli bemfihlo okanye nokuba ngabacuphi babucala liphelile; ngoku ungaqhuba uphando lwakho ngezixhobo ezine-tracker ye-GPS yokuhlola.
Izixhobo zakho zokuphanda eziphuculweyo: ikhompyuter, ifowuni kunye nento eneGPS Tracker okanye ikhamera!
Ukubhala eli nqaku, safunda okuninzi ngokusetyenziswa kwezi zixhobo. Ewe, iminyaka embalwa, singafumana yonke into (ngenxa yokukhangela okulula kwi-intanethi) kwaye kuwo onke amaxabiso izinto kunye nee-trackers ze-GPS zokuhlola. Kwaye yintoni eyothusayo xa safumanisa ukuba ezi zinto zithengwa kakhulu…. hlola iqabane lakhe!
Ungazi njani xa iqabane lakho lingathembeki
-Ukuvala iselfowuni yomlingane wakho ongathembekanga- kutheni?
Ukufumanisa ukuba iqabane lakho linokungathembeki kunokuba nzima kuba umntu okrexezayo engafane avume. Ke ngoko, awunanto ngaphandle kokubonisa ukusebenza. Umzekelo, umyeni utshintsha indlela aziphatha ngayo okanye izinto azenza mihla le ngaphandle kokuchaza ngokufanelekileyo olu tshintsho. Isenokuba luphawu lokungathembeki okanye ukungaqondi. Ngamanye amaxesha, abafowunanga okanye baphendule ifowuni xa ufowuna. Oku kunokuthetha ukuba banokungathembeki, okanye ukuqhuba kwaye abakwazi kuphendula. Ukuba ukrokrela iqabane lakho kuya kufuneka ujonge ukuba ziyazaphula izifungo zazo. Olona khetho lufanelekileyo kukulandela iselfowuni yendoda engathembekanga ukuqinisekisa ukuba bayathembeka okanye akunjalo. Ukungathembeki kuthatha iindlela ezahlukeneyo, iingcali zichaza iimpawu zamadoda angathembekanga:
Iimvakalelo - Iqabane lakho limanyene nomnye umntu, nokuba utshatile nawe.
Iifiziksi- xa bebona omnye umntu.
ISetyhula - Iqabane lakho lenze isenzo ngelo xesha
Iqabane lakho linokwabelana ngegumbi kunye nawe kwaye libe lokungathembeki nomnye umntu. Ke ngoko, kubalulekile ukulandelela iselfowuni yefowuni yakho ukuba iqokelele iindlela ezahlukeneyo zolwazi, ukubona ukuba ngaba ayithembekanga okanye ayithembekanga. Kuya kufuneka uyazi:
-Baphi abantu othetha nabo?
Iindidi zemiyalezo ebhalelwayo.
-Ixesha elichithwe kwindawo.
Ngaba kunokwenzeka ukuKhangela kwiQabane elingathembekanga?
Ukuba uyazibuza ukuba ungayilandela njani indoda enganyanisekanga kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo. Indlela engabizi mali kuku fakela isixhobo kwi-GPS kwinqwelo yeqabane lakho. I-GPS ikuvumela ukuba ulandelele iintshukumo zeqabane lakho ngexesha lokwenyani. Ukuba ufuna ukwazi ukuba iqabane lakho liya phi, ngamaxesha athile omhla, ke iGPS ifezekile. Izixhobo zeGPS ngokuqinisekileyo ziyasebenza kwaye awuyi kuchitha imali eninzi. Izixhobo zeGPS azisoloko ziluncedo kuba awunako ukufikelela umnxeba kulwazi kunye nemiyalezo ebhaliweyo kwii-smartphones zakho.
Eyona ndlela ilula yokuqinisekisa ukungathembeki kukulandela ifowuni yakho ye-smart phone ye-Spouse. Ukuhlola kwifowuni, kunokwenzeka ukuba ujonge imiyalezo, iifowuni kunye nokujonga indawo ye-Spouse yakho.
Kodwa ukulandela njani iselfowuni yeqabane elingathembekanga mahala? Enye indlela kukulandela intshukumo yeqabane lakho usebenzisa i-GPS. Uninzi lwee-smartphones zinenkqubo yokulandela umkhondo we-GPS, ukufumana ukuba umyeni wakho uphi. Akukho mfuneko yokuba ufake nasiphi na isixhobo sokulandela umkhondo kwifowuni. Umngcipheko wokuxhomekeka kwi-GPS kukungakwazi ukulandelela iminxeba, imiyalezo, uqhakamshelwano, iincoko ze-WhatsApp kunye nokunye. Esinye isisombululo kukufaka usetyenziso lokulandela umkhondo weselfowuni, kukho izicelo ezininzi zeenkqubo ze-Android okanye ze-iOS. Ii-spy zokusebenza zikunika iimpawu zokuqhuba umkhondo womnxeba wesini somyeni wakho, kubandakanya ne-GPS.
Indlela yokukhetha isixhobo seGPS ukuba usilandele?
Ngaphambi kokuba uthenge isixhobo seGPS, kubalulekile ukwazi izinto ezimbalwa. Kubaqalayo, awufuni GPS yesiqhelo. Ezi ndidi zeenkqubo ziyabhengezwa kumabonakude kwaye ziyafumaneka kwiindawo zokuthengisa ezininzi. Ewe, zizixhobo zeGPS, kodwa hayi uhlobo olifunayo. Kuya kufuneka banike abaqhubi imiyalelo. Awuyifuni i-GPS enesikrini esakhelwe ngaphakathi. Ezi zixhobo ngamanye amaxesha zenza ingxolo kwaye isikrini esikhanyayo sinokutsala ingqalelo yesixhobo, nokuba ifihlwe kakuhle. Ke, luhlobo luni lwe-GPS olufunayo?
Indoda nomfazi, abafuna ukubamba iqabane elinobuqhophololo, kufuneka bahlole umkhondo we-GPS besebenzisa abaphambili. Abaphathi basebenzisa ezi zixhobo ukulandelela abaqhubi. Banceda abaphathi ukuba babone ukuba ziphi na iidrive zabo, nokuba zikwishedyuli nokuba benza umsebenzi wabo ngokufanelekileyo. Nangona uninzi lwezi zixhobo zenzelwe ukubeka iliso kwiqela lezithuthi, ukulandela umkhondo kwizithuthi nganye kuyavunyelwa kuzo zonke iinkqubo.
Yenza uphando olusemgangathweni kwi-Intanethi ukufumana i-trackers ezifihliweyo ze-GPS okanye umkhondo we-GPS wezithuthi. Xa ujonga imifanekiso, ufuna isixhobo esincinci. Ufuna isixhobo esingenacingo ngaphandle kwesikrini esikhulu. Mnyama ngowona mbala ubalaseleyo. Jonga inkcazo yemveliso ukubona ukuba ufumana ntoni. Cwangcisa inkqubo ngomboniso obanzi. Awufuni kwazi nge-imeyile apho ikhoyo imoto yeqabane lakho. Ufuna ukuba iziphumo ziboniswe kwimephu. Khangela iinkqubo kunye neMephu zikaGoogle kuba unokukhetha umfanekiso wesatellite. Sondeza kwaye ubone indawo ngqo yemoto yeqabane lakho. Oku kumisela ukuba ungowasiphi na isakhiwo.
Isitshixo ekubambeni iqabane ukukopela kukulinda. Ngokwalungelelwaniso lomfazi wakho we-GPS, ukwindawo yokupaka ihotele yendawo. Sukummangalela ukuba ukukrexeza ekufikeni kwakhe. Landela ukuhamba kwabo kangangeentsuku okanye iiveki. Utyelela kangaphi ihotele? Ngenxa yokuba iqabane lakho lithatha ikhefu ngokungaqhelekanga kwindlela egodukayo oko akuthethi ukuba uyakopela. Sebenzisa umkhondo ofihliweyo we-GPS ukumisela iphethini ngaphambi kokuyeka izityholo. Nje ukuba le patheni isetelwe, kuxhomekeke kuwe isigqibo sokuba kuya kwenzeka ntoni ngokulandelayo.
5145 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-18 Namhlanje
Iingcebiso malunga nokusebenzisa umkhondo we-GPS ukubamba ukunganyaniseki…
Sebenzisa umkhondo we-GPS ukubamba iqabane lokukhohlisa
Ungayifumana njani umkhondo weGPS kwimoto yakho kumanqanaba e5
Ukukhetha umkhondo we-GPS othembekileyo womntwana wakho one-Autism
Ukuchonga umkhondo we-GPS okhokelayo eMntwini ngo…
Ukukhulisa umntwana onomntu one-Autism - Khetha eyona GPS…